Midabka Isbeddelka Garnet - Isku-darka laf-dhabarka iyo lafa-geedeedka - video
Midab Isku beddel Garnet
Tags Color Change, Garnet
Iibso dukaankayaga qurxinta midabka dabiiciga ee dabiiciga ah
Isku-darka laf-dhabarka iyo pyrope. Dhagaxaani wuxuu soo bandhigaa isbeddel midab leh oo ka soo jeeda muraayad iftiin ah si uu u iftiimiyo casaan iftiin leh. Dhacdadani waa mid aad u kacsan oo aad u sarreeya, taas oo ka sarreysa tan rasmiga ah ee alexandrite.
Xubin naadir ah oo qaali ah oo ka mid ah kooxda garnet ee maraakiibta. Waxaa aad loogu baahan yahay kartida ay u leedahay inay bedesho midabka. Waxay kuxirantahay nooca iftiinka iftiinka. Awoodda lagu beddeli karo midabka badiyaa ayaa si qalad ah loogu qaldamay mudnaanta. Waa kuwee karti u leh inay muujiyaan midabyo kala duwan iyadoo ku xiran xagasha muuqaalka. Halka dhacdooyinka isbeddelka midabku uusan ku xirnayn xagasha muuqaalka. Caadi ahaan waa isku-dhafan oo isku dhafan oo isku dhafan iyo walbahaar iyo xaalado badan, sidoo kale waxaa ku jiri kara raadadka grossularite ama garnet garnet.
Waa koox ka kooban macdanta macdanta. Waxaan u isticmaali jirnay tan iyo wakhtigii Bronze sida muraayadaha iyo sidoo kale abrasives.
Dhammaan noocyada dharka ayaa leh qaabab isku mid ah oo muuqaal ah iyo foomamka cagaaran, laakiin waxay ku kala duwan yihiin kiimikada. Noocyada kala duwan waa pyrope, sidoo kale almandine, spessartine, grossular (noocyo kuwaas oo ah hessonite ama qorfe-dhagax iyo tsavorite), uvarovite iyo andradite. Dhagaxyada waxay ka kooban yihiin labo taxane ah oo xeeldheer: pyrope-almandine-spessartine iyo sidoo kale uvarovite-grossular-andradite.
Xoojinta isbeddelka midab-badaliddu waxay noqon kartaa mid aad u xoog badan, sababtoo ah waxa badanaa ka sarreeya kuwa ugu fiicnaa alexandrite. Inta badan dhagaxyadaas waxay muujinayaan midab cagaaran-cagaaran ama naxaas leh marka la eego iftiinka dabiiciga ah, laakiin marka la eego iftiinka iftiinka, waxay u muuqan doontaa midab inay midab casaana. Waxaa sidoo kale jira noocyo kala duwan oo isbeddel midab ah oo suurtagal ah. Si aad si dhab ah uga mahadcelisid isbeddellada buuxa ee garnet isbeddel, shaybaarku waa in lagu ilaaliyaa xaaladaha iftiinka kala duwan, oo ay ka mid tahay iftiinka subax hore, subaxda dambe ee dambe, iftiinka iftiinka iyo iftiinka iftiinka ama shamaca.
Daaweyn ma jirto
Sida muraayado badan oo garnet ah, isbeddelka midabka lama ogaan karo in la daaweeyo ama sidoo kale loo horumariyo si kasta.
Nooca kiimikada: [Mg3 + Mn3] AL2 (SIO4) - Manganese silicate silicate
Hardness: 7 ilaa 7.5
Cufnaanta: 3.65 ilaa 4.20
Transparency: Iskudhufsan, sawirqaade, muuqaal
Midab Isbedel Garnet, oo ka yimid Tansaaniya
Safaax isbedelka midabka
Tags Color Change, Safayr